အသိတရား – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	အသိတရား
Comments comments	Tags: feeling	Post navigation
← Return of MMgenius by BlackdreamWordPress Banner အလွယ်တကူ ပြောင်းဖို့ →
2 comments on “အသိတရား”	မောင်မိုး says:	March 19, 2010 at 12:20 pm	ကျေးဇူးဗျာ ..ရေးပေးတဲ့အတွက်။ ဘောဇိက မိဘအပေါ် သိတတ်ရမယ့် အသိတရားအကြောင်းကို အတိုဆုံးနဲ့ အထိမိဆုံး ရေးသွားတာပဲ။ မိဘဘာဖြစ်ဖြစ် မိဘဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကနေ မလျော့ကောင်းပါဘူး။ အင်းဗျာ.. ကျွန်တော်တော့ မိဘအပေါ် သိတတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် မိဘကျေးဇူးပေါ့ဗျာ။ ဆပ်မကုန်တဲ့ကျေးဇူးပေါ့။
(တန်းပလိတ်လှတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ နှင်းတွေကျနေတာက ရှုပ်နေသလိုပဲ။ အဲဒါလေးဖြုတ်လိုက်ပါလား)
ဏီလင်းညို says:	March 21, 2010 at 9:07 pm	zoxရေ….
ကိုဏီ့အတွက်ကတော့ မိဘက နံပါတ်၁၊ ၂၊၃၊ ၄၊၅၊ စသဖြင့်ပါပဲဗျာ……..။